Puntland: Rabshado ka dhacey magalada Garowe
GAROWE- Magaalo madaxda Puntland ee Garoowe ayaa waxaa ka dhacey rabshado kooban kadib markii dhalinyaro ka careysan cayaartii galabta laga badiyey kooxda kubbada Cagta maamulka Puntland ay weerareen qaar kamid goobaha ganacsiga ee ku yaal bartamaha magalada.
Dhalinayradaan ayaa isugu yimid inta cayaartaan socotey halka loo yaqaan Barxada magalada Garowe kuwasoo qorsheynayey iney goobtaas ku dabaal-dagaan hadii kooxda kubadda Cagta Puntland ka guuleysato koobka kubadda Cagta ee tartanka maamulada Soomaaliya.
Goobaha ganacsiga ee ku yaal bartamaha magalada Garoowe ayaa la xirey rabshadahaas kadib iyadoo ciidamada Booliska kala eryeen dhalinyaradaan oo Hakad galiyeen isu socodkii Gaadiidka iyo dadweynaha lugeynaya.
Meelo kamid ah magalada ayaa laga maqley rasaas ciidamada Booliska kor u ridayeen iyadoo aysan jirin khasaare kasoo gaarey dhalinyaradii rabshadaha sameysay.
Shacabka Puntland oo filayey mar hadii gobolka Banaadir kaga adkaadeen cayaartii hore iney si sahlan uga guuleysan karaan maamulka Jubaland ayaa u qaadan kari waayey guuldardii gakabta.
Kooxda ka socota maamulka Puntland oo qaadey horyaalka kubbada Cagta maamulada Soomaaliya sanadkii hore ayaa hadda gashey kaalinta Labaad.
Jubaland ayaa sidoo kale sanadkii hore gashey kaalinta Labaad ee cayaaraha maamulada Soomaaliya iyadoo looga adkaadey cayaarta qaybteeda ku laadista xorta ah kadib markii 90 daqiiqo ee cayaarta ay ku dhamaatey Bar-bar-dhac.
Qarax khasaaro kala duwan sababay oo ka dhacay waqoyga Baydhabo
Soomaliya 24.05.2020. 17:23
Goobta weerarku ka dhacay ayaa lagu waramay in ay ka socotay ciyaar dhaqameed.
Jubbaland oo ku dhawaaqay kiisas cusub oo ah fayruska Corona
Soomaliya 28.04.2020. 15:29
Axmed Madoobe, Cabdirashiid Xidig iyo Seeraar oo heshiis gaarey
Soomaliya 05.04.2020. 13:50
Madaxweynaha Jubaland oo la kulmay odayaasha dhaqanka Dhoobley
Soomaliya 25.02.2020. 15:30